Maxaa laga filan karaa dakedda Berbera ee xariga laga jaray? | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkadda DP World, ayaa ku guuleysatay soo gabagabeynta Wejiga koowaad ee mashruuca ballaadhinta Dekedda Berbera, waxaana maanta la daah furay Terminal cusub.
Berbera, Soomaaliland - Wejiga koowaad ee mashruuca ballaadhinta Dekedda Berbera ayaa dawaaan si rasmi ah xarigga looga jaray, waxaana maal-galisay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraatka.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Guddoomiyaha guud ee DP World Suldaan Axmed bin Sulayem, ayaa xarigga ka jaray dekeda Barbara, musaabad ka dhacday xarunta gobolka Saaxil, oo ay goob jog ka ahaayeen in ka badan 200 oo qof oo martida ah.
Waxaa madasha ku sugnaa wafti ka socda Dawladda Itoobiya, oo uu hoggaaminayo Axmed Shide, Wasiirka Maaliyadda Itoobiya isla-markaana uu wehliyo Madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafe Cagjar.
DP World, sida ay hore u sheegatay waxaa ka go’an inay maalgaliso $442 milyan, si loo horumariyo loona ballaariyo Dekedda Berbera, iyadoo wejigii koowaad hadda la dhammaystiray, waxaa durbaba socda hawlo lagu sii ballaadhinayo dekedda wejigeeda labaad.
Heshiiska Dekedda Berbera, oo Saddex geesod ah ayaa dhigaya in shirkadda DP World ay maamulayso Dekedda, iyada oo leh saami dhan 51%, halka Somaliland ay yeelanayso boqolkiiba 30%, Isla-marakaana Itoobiya, qaadaneyso 19%.
Keydmedia Online, waxa ay hore u baahisay in Dowladda Itoobiya iyo Shirkadda DP World, ayaa kala saxiixdeen is-afgarad (MOU) u jeedkiisu yahay horumarinta waddada xariirisa Itoobiya iyo magaalada Berbera, kaas oo aysan goob joog ka ahayn Maamulka Soomaaliland iyo Dowladda Fadaraalka midna.
Dowladda Fadaraalka ayaa Saddex sano ka hor sharci darro ku tilmaantay heshiiska Dekadda Berbera ee u dhaxeeya Soomaliland iyo shirkadda DP World, halka Baarlamaanka Soomaaliya uu 12 Maarso 2018, si buuxda u diiday heshiiskaas, inkastoo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo uusan wali saxiixin.
Shaki kuma jiro, in Dekedda Berbera tahay il-ganacsi oo kusoo korortay gayiga Soomaalida, waxaana ka sakow dadkeeda, (Soomaalida), ka faa’iideysan doona dalka aan badda lahayn ee Itoobiya.
Berbera, waxa ay tartan la gali doontaa dekedaha Jabuuti iyo Eritrea, oo ay wax kala soo degto Dowladda Itoobiya, waxayna hormuud u noqon kartaa isbadel dhaqaale oo Geeska Africa ka dhaca, haddii loo maro jid sax ah.